Ukuze ukhiqize okukhishwa kwekhwalithi ye-premium kusuka kuma-botanicals ngokusebenza kahle okukhulu, okusho ukuthi isivuno esikhulu sezikhangiso zekhwalithi ye-premium esikhathini esifushane sokukhipha, inqubo yokusebenza yokukhishwa ephezulu iyadingeka. Isizinda se-Ultrasonic inqubo yokuqinisa inqubo, evumela ukusebenzisa izinto eziningi zokusetshenziswa futhi ikhiqize isivuno esiphezulu sezinto eziphakeme ngendlela esheshayo futhi engabizi.
Ukukhishwa kwe-Premium Botanical nge-Power Ultrasound
Lapho kukhishwa ingxube ethile ye-bioactive noma ingxenyana ye-bioactive kusuka ku-botanical, izinto ezahlukahlukene zithonya inqubo yokukhipha. Ngaphandle kobuchwepheshe besizinda (isb. Isizinda se-ultrasonic), ubukhulu be-solvent, impahla eluhlaza kanye nokwelashwa kwangaphambi kwayo, isilinganiso esiqinile / soketshezi (okungukuthi, isilinganiso sezitshalo / isisombululo se-solvent), isikhathi sokukhishwa, kanye nokushisa kubalulekile inqubo inqubo okufanele kucatshangelwe ngokucophelela. Isizinda esisizwa nge-Ultrasonically (i-UAE) sivumela izimo ezifanele zokucubungula, ezibonakala ngobumnene nokusebenza kahle ngasikhathi sinye. Ukuzikhethela kwama-solvent amnene noma ukukhipha amanzi abandayo, amazinga okushisa aphansi, nezikhathi zokucubungula okufishane kuguqula isizinda se-ultrasonic sibe inqubo esezingeni eliphezulu yokukhipha, evimbela ukonakala okushisayo noma kwamakhemikhali kwama-molecule we-bioactive. Ngaphezu kwalokho, i-UAE ingakhipha inani eliphelele elitholakalayo lama-molecule we-bioactive kusuka entweni eluhlaza eluhlaza. Kungakho i-ultrasonication ingubuchwepheshe obusetshenziswa kakhulu besizinda sokukhiqiza izinto ezinamandla amakhulu.
Ukukhishwa kwe-botanical ne I-UP400St (400W, 24kHz)
Ukukhishwa Kwamanzi Abandayo kusetshenziswa i-UP400St ene-22mm sonotrode (S24d22 probe)
Yini eyenza i-Ultrasonic Extraction Superior?
Isizinda esisizwa yi-Ultrasonically-assisted (UAE) kuyindlela esebenza kahle kakhulu yokukhipha, esekwe kumandla emishini angenacala. I-Ultrasonic noma i-acoustic cavitation ibonwa ngamandla amakhulu okushefa kanye nokwahluka ngokwenzeka endaweni okushisa okuphezulu nokucindezela. Le mikhosi enamandla kakhulu yokubanga izimbangela yenza lokho okubizwa ngokuthi yi-sonoporation, okuyisizukulwane esisha nokwandiswa kwama-pores akhona kulwelwesi lweseli, kanye nokuphazamiseka kwezakhiwo zamaseli ezitshalo. I-ultrasonically intensified flux of solvent in and out of the cell elingaphakathi inegalelo ekukhishweni okusheshayo nokuphelele kwezinto zezitshalo. Isebenzisa amandla womshini kuphela, i-UAE ayishintshi ama-molecule we-botanical ngamakhemikhali noma ukwelashwa okushisayo okukhulu futhi ivimbela ngaleyo ndlela ukuguqulwa kwamakhemikhali noma okushiswa yizinto eziphilayo ezitholakala kwizitshalo zezitshalo. Ngenxa yalokho, isizinda se-ultrasonic sikhiqiza okukhishwa kwekhwalithi ephezulu, okugcwele okuhlinzeka ngemiphumela ephelele yezinto ezihlanganisiwe ze-botanical, ezaziwa njengalokho okubizwa ngokuthi yi-entourage effect.
Isizinda se-ultrasonic: inqubo engeyona eyokushisa, kodwa esebenza kahle kakhulu yezithelo eziphezulu zokukhishwa kwekhwalithi ye-premium.
Ukuqhathanisa Isizinda se-Ultrasonic Nezinye Izindlela
Isizinda se-Ultrasonic kuyindlela esetshenziswa kabanzi ukukhipha nokuhlukanisa izinto ezihlanganisa izinto eziphilayo ezifana nama-antioxidants, ama-polyphenols, ama-polysaccharides, amaprotheni, ama-lipids, ama-cannabinoids namanye ama-phytochemicals avela ezintweni zezitshalo. I-Sonication iyindlela ekhethwayo ngenxa yezinzuzo eziningi ezifana nokuvunwa okuphezulu / okuphelele kokukhipha, ukucubungula okusheshayo, okungashisi, ukuhambisana cishe nanoma yimaphi ama-solvent (isib. Amanzi, i-ethanol, i-methanol, i-isopropanol, uwoyela wemifino, i-glycerine njll ukusebenza, ukugcinwa okuphansi phakathi kwabanye abaningi.
Ithebula elingezansi liqhathanisa isizinda se-ultrasonic nezinye izindlela ezivamile zokukhipha ezibonisa izinzuzo ze-UAE.
Ama-ultrasonic extractors avela ku-Hielscher ahamba phambili ngokusebenza kahle, ukwethembeka, nobungani bomsebenzisi
Solvent iyahambisana cishe noma yiliphi i-solvent amanzi, i-solives enamanzi futhi engamanzi I-CO2 amanzi, i-solives enamanzi futhi engamanzi Izixazululo ze-Organic
lokushisa isizinda esingesona amafutha,
ukulawula okuqondile kokushisa i-ambient ngaphansi kokushisa izinga lokushisa
kwesinye isikhathi kufakwa ukushisa ngaphezulu kokubucayi
lokushisa okungu-31 ° C
ukucindezela zombili, zezulu noma
ingcindezi ephakeme engenzeka emkhathini emkhathini emkhathini izingcindezi eziphakeme kakhulu
(ngaphezulu kwengcindezi ebucayi yamabha angama-74)
Icubungula Isikhathi ngokushesha kancane kancane kancane ngokulinganisela
Inani le-Solvent okuphansi,
umthwalo omkhulu oqinile wezinto zezitshalo
endaweni eyi-solvent, ikakhulukazi lapho iseli lokugeleza
ukusetha kusetshenzisiwe enkulu ngokulinganisela enkulu amanani amakhulu
Ubumbano be-Natural Extract kuncike solvent;
ukukhipha okungahambisani nepolar
amakhompiyutha, okukhishwa kwesigaba esimbili
usebenzisa izithambisi ezimbili kunconywa kuncike solvent kuncike solvent kuncike solvent kuncike kwengcindezelo
(ngaphansi kwengcindezi ephakeme more polar)
Ukuvumelana nezimo / ukukhubazeka kokukhishwa kwe-batch kanye ne-inline,
ukusabalalisa okulinganayo Ukukhishwa kwe-batch kuphela,
ukukhubazeka okulinganiselwe Ukukhishwa kwe-batch kuphela,
ukukala okuqondile komugqa,
Kungani ukukhishwa kwe-Ultrasonic kusebenza kahle kangaka?
Umshini wokuqinisa amandla we-ultrasound ubangelwa ikakhulu yisimo se-acoustic cavitation. I-Ultrasonic cavitation ibangela ukushayisana phakathi kwezinhlayiya ze-biomass ye-botanical, okuholela ekuhlukaneni okuhlukanisiwe nokuncishiswa kosayizi wezinhlayiyana. Lapho ama-bubble e-cavitation ewa ebusweni bezinsalela zemifino, ukuguguleka komhlaba kanye nokukhiqizwa kabusha kukhulisa indawo yezinhlayiyana ngokuqhubekayo. Lokhu kudlulisa okukhulu okusiza ngaleyo ndlela kusiza ukukhishwa kwama-molecule afana namaprotheni, i-lipids, ushukela, amavithamini, ama-antioxidants, ama-phyto-chemicals kanye nemicu yokudla. Amandla e-shear akhiqizwa nge-Ultrasonically athuthukisa ukungena kwe-solvent ku-matrix yeselula yendaba yezitshalo futhi kuthuthukise ukutholakala kwezingqamuzana zeseli, ngokulandelana. Lezi zindlela zamandla we-ultrasonics zibhekele inqubo ebalulekile yokuqinisa etholakala lapho i-ultrasonication isetshenziselwa ukukhishwa kwe-botanical.
Izinzuzo ze-Ultrasonicators ze-Botanical Extraction
ukukhishwa kwekhwalithi ye-premium
inqubo esebenza kahle kakhulu, esheshayo
izindleko zokusebenza eziphansi
Okulula & Ukusebenza okuphephile
Thola Ulwazi Lobuchwepheshe ku-Hielscher Ultrasonic Extractors kanye Nezinzuzo Zabo!
Imiklamo ye-Hielscher Ultrasonics, ikhiqiza futhi isabalalise ukusebenza okuphezulu kwe-ultrasonic ye-batch nokuqhutshwa okuqhubekayo kunoma yisiphi isikali sokukhiqiza. Ngaphandle kwezindinganiso zobuchwepheshe eziphakeme kakhulu nokuqina okuvelele nokusebenza kwe-24/7/365 kokusebenza okuphezulu, ama-ultrasonicators ama-Hielscher kulula futhi anokwethenjelwa ukusebenza. Ukusebenza kahle okuphezulu, isoftware ehlakaniphile, imenyu enembile, ukulawulwa kwedatha okuzenzakalelayo nesilawuli kude sesiphequluli yizici ezimbalwa ezihlukanisa abakhiqizi be-Hielscher kweminye imishini yokukhipha.
Izinzuzo ze-Hielscher Ultrasonic Extractors
Ama-solvents aluhlaza (amanzi, i-ethanol, i-glycerin, uwoyela wemifino njll)
Xhuma 'n’ dlala - Setha futhi uqeqeshe kungakapheli amahora
Ukusetha okulula - Isekela izingqinamba eziningi, kanye nokuxhunywa kwamapayipi amane kuphela
Layisha ngokushesha bese wehlisa phakathi kwamaqoqo
Izixazululo ze-Ultrasonic Extraction
Khetha i-solvent efanelekayo yenqubo yakho yokukhipha: ingxube yamanzi, utshwala bamanzi, i-isopropyl alcohol, i-hexane, i-ethanol, i-methanol, i-butane, uwoyela wemifino, i-glycerine,
ama-solvent angenabuthi kanye nanoma yimaphi amanye ama-solvents ajwayelekile ahambisana nesizinda se-ultrasonic.
Isizinda se-Ultrasonic Cold-Water: Yize amanzi ngobuchwepheshe kuphela, lokho okubizwa ngokuthi yi-universal solvent, isizinda esisekelwe emanzini ngokuvamile sithathwa njengesizinda esingesona isisombululo. Isizinda se-solvent-free solvent asidingi izinto zangaphandle. I-slurry yamanzi nezinto zokutshala zenzelwe ukuphula izindonga zamaseli ezitshalo ukuze ama-molecule we-bioactive akhishwe emanzini (i-solvent). I-Sonication iyindlela ehlanzekile yemishini, engashintshi amakhemikhali impahla eluhlaza kanye nokukhishwa. Ngakho-ke, ukukhishwa kwe-ultrasonic kuyindlela ekhethwayo yokukhiqiza ukukhishwa kwekhwalithi ephezulu yezitshalo.
I-Probe-type ultrasonicator I-UIP1000hdT ne-stirrer yokukhiqizwa kwezikhangiso ze-botanical ezifana ne-cannabinoids (isb., i-CBD, i-THC, i-CBG)
Ithebula elingezansi likunikeza inkomba yamandla wokucutshungulwa okucutshungulwayo we-ultrasonic extractors (batch and flow-through processing):
Ukufakwa kwezimboni komkhiphi we-ultrasonic I-UIP4000hdT ukukhiqizwa kokukhishwa kwe-botanical.
I-Hielscher Ultrasonics ikhiqiza futhi inikeze ngokukhishwa okuphezulu kokusebenza kwe-ultrasonic kwelebhu, umshayeli kanye nesikali sezimboni.